Ho An’ny Vondrom-piarahamonina LGBT Any Jordania, Tsy Mitovy Ny Hafatra Alefan’ireo Bokin’ny Lalàna Sy Tena Zava-misy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Febroary 2017 5:54 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Ελληνικά, bahasa Indonesia, Italiano, Français, عربي, English
SNOW nataon'i Ibrahim Owais (Creative Commons)
(Fanamarihana: rohy mankany amin'ny teny Anglisy daholo no ato anaty lahatsoratra)
Noheverina ho iray amin'ireo mandroso indridra any Afovoany Atsinanana ny fihetsik'i Jordania manoloana ny olan'ny LGBT, satria nesorina tamin'ny Fehezandalàna famaizana tamin'ny 1951 ny fanamelohana ny firaisana ara-nofo eo amin'ny olona mitovy fananahana. Na izany aza, ny tsy fanamelohana fotsiny dia tsy afaka hiantoka ny tena fahafahan'ireo mpikambana ao anatin'ny vondrom-piarahamonina LGBT ao Jordania. Ny Andininy faha-enina ao amin'ny Lalàm-panorenana Jordaniana no miaro ny olom-pirenena amin'ny fanavakavahana miorina amin'ny firazanana, fiteny, na ny fivavahana, fa tsy miitatra amin'ny olona izay manana fireham-pananahana samy hafa.
Io faritra mivolombatolalaka (tsy mazava) io dia toerana mbola ahitana fanavakavahana amin'ny fiainana andavanandron'ny olona LGBT. Nasser *, tanora iray 23 taona, izay nifindra tany Jordania, herintaona lasa izay, ary mamaritra ny tenany ho toy ny lehilahy tia lehilahy, dia niangaviana mba hiala tao amin'ny toerana iray noho ny fanehoany ampahibemaso ny fitiavany. “Nanatona anay ny mpitantana ny trano fisotroana ary nilaza fa voarara izay ataonay. Nolazaiko taminy fa fantatro ny lalàna, ary tsy hoe tsy ara-dalàna izany any Jordania,” hoy izy tamin'ny Global Voices. “Nilaza taminay izy, ‘mety hoe mahazo alàlana ao Jordana izany fa tsy azo atao eto,’ ary dia tsy nahazo aina izahay ka lasa nandeha.”
Ho an'ny olona niova fananahana, vao mainka sarotra sady mampidi-doza ny toedraharaha. Ny andininy faha-307 ao amin'ny Fehezandalàna famaizana Jordaniana dia milaza: “Izay lehilahy manao fiakanjonà vehivavy ary miditra amin'ny toerana natokaha ho an'ny vehivavy irery ihany na tsy afaka idirana ankoatry ny vehivavy amin'ny fotoana anaovana ilay fihetsika, dia ho voasazy an-tranomaizina mandritra ny fe-potoana tsy mihoatra ny enim-bolana. “Na izany aza, amin'ny fampiharana, niaina fanorisorenana na eny imasom-bahoaka aza ireo olona niova fananahana.
Ohatra iray toy izany ny nahazo an'i Farah*, lehilahy niova ho vehivavy izay nandeha teny akaikin'ny tsena fony izy naronjona sy nosotasotain'ny vondron-dehilahy nandeha anaty fiara. Tsy norarahiany izy ireo ka tezitra, nivoaka ny fiara ary nanatona azy.
“Nosintonin'izy ireo ny voloko ary ary natositosiny aho, niezaka hangalatra ny kitapoko izy ireo,” hoy izy tamin'ny Global Voices. “Farany, ny iray tamin'izy ireo nampiditra ny tànany ao amin'ny kitapo ka nangalatra sasany tamin'ny volako talohan'ny nandosirany. Nisy olona sendra nanatrika ny fifamaliana teo niantso ny mpitandro filaminana, izay tonga tany an-toerana, nitaky hijery ny mombamomba an'i Farah.
“Niakanjo toy ny vehivavy aho ary fantatro fa mety hiteraka ahiahy izany”, hoy izy. “Noho izany, namorona tantara momba ny fananako olana amin'ny hormonina aho ary izany no mahatonga ny endriko ivelany ho vehivavy kokoa noho ny ao amin'ny torohay momba ahy.
Tsy resy lahatra sady sahiran-tsaina, nentin'ny polisy niverina tany amin'ny birao izy, ary nivadika haingana ny toe-javatra izay nihamafy ho toy ny fakàna am-bavany mikasika ny endriny ivelany sy ny fomba fitafiny, fa tsy momba ny fanafihana sy fandrobàna azy.
“Nanontany ahy izy ireo hoe nahoana aho no nitafy toy ny tovovavy, ary niantso ahy tamin'ny teny manambany toy ny mukhanath (lehilahy sarimbavy),” hoy i Farah. “Nampangain'izy ireo ho nanao fihetsika tsy maotina imasom-bahoaka sy nanafina ny momba ahy aho, na dia nanazava tamin'izy ireo aza fa izaho io olona ao amin'ny torohaiko io.
Rehefa notanana nandritra ny roa andro, dia nohelohina izy hijanona ao an-tranony mandritra ny enim-bolana “ho fiarovana azy manokana”. Ity fitànana azy an-trano ity dia midika fa tsy maintsy tonga ao an-tranony alohan'ny amin'ny 5 hariva izy isanandro, ary tsy maintsy manomboka anarana isanandro any amin'ny biraon'ny mpitandro filaminana mba hanaporofo fa mbola ao an-tanàna izy.
Izay alehako isanandro dia tolona. Miatrika ompa sy fanambaniana isanandro aho, ary voasava eo am-pidirana miaraka amin'ny fitazotazonan'izy ireo ny vatako mba hahatonga ahy tsy hahazo aina. Izaho irery no voasava amin'ny olona izay tsy maintsy misoratra anarana.
Nahatonga an'i Farah hanapaka hevitra handao an'i Jordania ilay traikefa. Mikasa ny hifindra any Eoropa izy aorian'ny fitànana azy ao an-tranony ary hamita ny fianarany; zavatra izay tsy azony natao hatramin'ny nandroahana azy teny amin'ny ambaratonga ambony (lycée) taorian'ny nahalalana fa olona niova fananahana izy. Araka ny Tatitry 2015 an'ny Human Rights momba an'i Jordania notarihin'ny Departemantam-pirenena Amerikana, mitombo hatrany ireo olana atrehin'ny olona niova fananahana amin'ny fahazoana fanabeazana sy ny raharaham-panjakana. Mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny fitadiavana asa koa ny maha-olona niova fananahana, matetika, mamelà ny fivarotantena ho hany sisa safidy tokana ahazoan'ireny olona ireny karazanà fidirambola.
Nisy ny ezaka efa natao mba hanentanana ny olona amin'ny olan'ny LGBT, indrindra tao anatin'ny taona vitsy lasa. Tamin'ny 2015, ireo LGBT mpikatroka tsy manara-penitra sy ny gazetiboky My.Kali ao Jordania dia nikarakara hetsika kely tao Amman renivohitra ho an'ny tontolo andro iraisam-pirenana hiadiana amin'ny fankahalana pelaka, fankahalana ireo niova fananahana, tahotra ny hihevitra ny tena ho mpanavakavaka (IDAHOT), izay nanatrehan'ireo mpikambana maromaro avy aminà masoivoho Eoropeana sy ny masoivohon'i Etazonia ilay hetsika, tsy tamin'ny fomba ofisialy, ho toy ny fanehoana fanohanana, ka nahatonga ny fanamelohan'ny manampahefana Jordaniana ny masoivohon'i Etazonia. Na izany aza, narahina maso tao Amman ny IDAHOT ny taona manaraka, na dia tany amin'ny toerana miafina aza.
Hasan, iray amin'ireo mpikatroka mafàna fo vitsivitsy nisokatra tamin'ny olan'ny LGBT ao Amman, dia miasa ho an'ny fanentanana sy ny fanomezana toerana ary fanohanana ho an'ny tanora LGBT ao Jordania. Izy sy ireo namany sasany mpiara-mpikatroka mafàna fo dia nikarakara vondrona fanohanana tsy miankina hifanakalozana hevitra isambolana momba ireo olana toy ny fiarovana sy ny VIH, ny fahasalamana ara-tsaina, ny fivoahana, ary ny olana ara-pinoana.
“Nanomboka tamin'ny mpikambana valo fotsiny izahay,” hoy Hasan, “fa amin'izao fotoana izao, mitombo ho tambajotra eo amin'ny zato eo izahay. Afaka manasa olona hafa ny mpikambana raha toa ka atokisan'izy ireo sy vonona hiantoka azy ireo izy, ary ny fiarovana no laharam-pahamehana. Tsy maro no sahy miresaka tsy amin'ahiahy momba ireo olana ireo toa ahy, ary tena zava-dehibe ny manamarika fa miaraka miasa amin'ny olona izay nandray anjara lehibe amin'ity vondrom-piarahamonina ity aho.
Tsy fantatra mazava ny hoavy ho an'ny olona LGBT ao Jordania, fa araka ny filazan'i Hasan hoe: “tsy voahilika hiala any ambany latabatra ilay olana nony farany.” Ny fivoarana mahaliana dia ny fiakaran'ny Printsy Jordaniana, Zeid Ra'ad Al Hussein, ho eo amin'ny toeran'ny Kaomisera Ambony ao amin'ny Firenena Mikambana misahana ny Zon'olombelona tamin'ny Septambra 2014. Nandroso tolokevitra maherin'ny roapolo mba hiarovana ny olona LGBT ny Printsy Zeid , anisan'izany fisoloana vava ny firenena rehetra hanome fiarovana araka ny lalàna ho an'ny mpivady mitovy taovam-pananahana sy ny zanany, fanomezana azy ireny ny tombontsoa mitovy amin'izay omena ny mpmivady tsy mitovy fananahana. Miasa amin'ny anaran'ny fiarahamonina iraisam-pirenena ny Printsy Zeid fa tsy hoe ho an'i Jordania, mazava ho azy, fa andrasana izay ho vokany, raha hisy, amin'ny tolokeviny sy ny politikany amin'ny fampitsaharana ny herisetra atao amin'ny olona LGBT ao amin'ny fireneny .
*Novàna ireo anarana mba hiarovana ny fiainana manokan'ny olona izay mandray anjara ao anatin'ity tantara ity.